Kadib Fashilkii Eden Hazard Ee No.10-ka, Muxuu Ka Yidhi In Uu Sergio Ramos Kala Wareegi Doono Rekoodhe Tuurista Real Madrid? - Gool24.Net
Kadib Fashilkii Eden Hazard Ee No.10-ka, Muxuu Ka Yidhi In Uu Sergio Ramos Kala Wareegi Doono Rekoodhe Tuurista Real Madrid?
Eden Hazard ayaa qaab kaftan ahaan ah u sheegay in uu fashil kala kulmay isku daygii uu Luka Modric ku waydiistay maaliyada No.10 ka kooxdiisa cusub ee Real Madrid laakiin arinta kale ee taagan ayaa ah in uu Sergio Ramos kala wareegi doono tuurista rekoodhayaaasha.
Tan iyo markii uu Cristiano Ronaldo ka baxay Santiago Bernabeu, kabtanka Real Madrid ee Sergio Ramos ayaa noqday xidiga tuurayay rekoodhayaasha Madrid laakiin waxaa la ogyahay sida uu Hazard isna ugu fiican yahay rekoodhe tuurista ee uu Chelsea waqtiga badan u soo tuurayay.
Eden Hazard ayaa wax laga waydiiyay haddii uu Sergio Ramos kala wareegi doono tuurista rekoodhayaasha kooxdiisa cusub ee Real Madrid wuxuuna uga jawaabay si farsamaysan.
Eden Hazard oo rekoodhe tuurista Madrid iyo in uu Ramos kala wareegi doono ka jawaabaya ayaa yidhi: “Kabtanku waa rekoodhe qaate fiican, haddii uu aniga iga dalbado in aan qaato….. inkasta oo aanan filayn in uu samayn doono (qosol), waxaan qiyaasayaa in uu sii wadan doono qaadashada rekoodhayaasha, shaqo fiican ayuu ku soo qabtay”.
Hazard ayaa la waydiiyay in ku soo biiristiisa Real Madrid ay ka caawin doonto in uu ku guulaysto abaal marinta xidiga aduunka ee Ballon d’Or wuxuuna ku jawaabay: “Sanadkan guulaystaha Ballon D’or waa Luka Modric. Anigu ma ogi haddii ay halkani ka sahlan tahay in lagu guulaysto, laakiin waxay ku xidhan tahay sida aanu u ciyaarno”.
“Sanadihii ugu danbeeyay ciyaartoyda Real Madrid ayaa ku soo guulaysanayay in badan, anigu waxaan diirada saarayaa waxa wada jirka ah oo aan kooxda ka caawiyo in ay guulaysato isla markaana haddii hal maalin aan ku guulaysato Ballon d’Or, kadib maxay tahay sababta diidaysaa?. waxa ugu muhiimsani waa koobabka aan Real Madrid”.
Miyuu Eden Hazard hogaamiye u noqon doonaa Real Madrid sidii uu kooxdiisii hore ee Chelsea ugu soo ahaa waxa uu isaga oo ka jawaabaya yidhi: “Dhawr hogaamiye ayaa jooga Real Madrid, mid kaliya ma aha. Guruubka ayaa muhiim ah. Anigu waxaan doonayaa in aan isku dayo sidii aan kooxda horumar ugu samayn lahaa khibradayda”.
“Gambiska aan sameeyo, goolasha aan dhaliyo, waxaan rajaynayaa in aanu shaqo fiican wada jir u qaban doono, anigu waxaan hogaamiye ka ahaa Chelsea iyo kooxda qaranka, waxaan rajaynayaa in ay halkani la mid noqon doonto”.ayuu Hazard hadalkiisa sii raaciyay.